I-Cajun History, uLwimi, uMculo, iCuisine, kunye neNkcubeko
I-Cajuns liqela labantu abaninzi abahlala e-Louisiana, enommandla ocebileyo kwimbali yamasiko amaninzi. Ehla ukusuka kuma-Acadians, abahlali baseFransi abavela e-Atlantican Canada, namhlanje banokubhiyozela inkcubeko eyahlukileyo neyantlukwano.
Ngexesha le-17 neye-18 leminyaka abahlali baseFransi bafudukela e-Nova Scotia, eNew Brunswick nase-Prince Edward Island. Apha basungula uluntu kwimimandla eyaziwa ngokuba yi-Acadia. Le koloni yaseFransi yahluma iminyaka engaphezu kwekhulu.
Ngo-1754, iFransi yaya empini neBritish Great eMntla Melika malunga neentlanzi zokuloba kunye nemigudu yokubambisa imilenze, ingxabano eyaziwa ngokuba yiMfazwe Yeminyaka Yesixhenxe. Le mpixano yaphela ekunqothulweni kweFrentshi kunye neSivumelwano saseParis ngo-1763. IFransi yaphoqeleka ukuba ilahle amalungelo abo kwimimandla yaseNyakatho Melika njengesivumelwano saloo mvumelwano. Ngebudeni bemfazwe ama-Acadians abathunjwa esuka ezweni ababenokuhlala kuyo iminyaka engaphezu kwekhulu, inqubo eyaziwa ngokuba yi-Disturbance Great. Abase-Acadians abathunjiweyo bahlala kwiindawo ezininzi kubandakanya i-British North American colonies, iFransi, iNgilani, iCaribbean kunye nabanye, i-coloni yaseSpeyin eyaziwayo njengeLouanaana.
Ukuhlala kweCajun Country eLouanaana
Amakhulu angamawaka amakhoboka ase-Acadians afika kwikoloni yaseSpeyin ngexesha lama-1750. Isimo sezulu esitshatyalaliswayo sasinzima yaye abaninzi baseAcadi bafa kwizifo ezifana ne-malariya. Abase-Acadians banokugqibela bajoyina abazalwana abakhuluma isiFrentshi ngexesha nangemva kokuphazamiseka okukhulu. Malunga no-1600 ama-Acadians afika ngo-1785 yodwa ekuhlaleni i-Louisiana enyakatho yanamhlanje.
Abahlali abatsha baqala ukuhlakulela umhlaba wezolimo baze bahlamba iGulf of Mexico kunye neendawo ezijikelezayo. Bahamba ngomlambo waseMississippi. Abantu abavela kwamanye amasiko kuquka i-Spanish, i-Canary Islanders, amaMerika aseMelika, inzala yabakhoboka base-Afrika kunye namaCreoles aseFransi aseCaribbean ahlala eLouisana ngeli xesha elifanayo.
Abantu abavela kulezi nkcubeko ezahlukeneyo badibanisana kunye neminyaka kwaye baqulunqa i-Cajun culture. Igama elithi "Cajun" ngokwalo liyi-intanethi yegama elithi "Acadian," kwiilwimi zesiFulentshi esekelwe kwi- creole eyathethwa ngokubanzi phakathi kwabahlali beli ndawo.
IFransi yafumana iLouanana esuka eSpain ngo-1800, kuphela ukuthengisa indawo eMelika yaseMelika iminyaka emithathu kamva kwi- Louisiana Purchase . Indawo eyayihlala yi-Acadians kunye nezinye iinkcubeko zaziwa ngokuba yiTritory of Orleans. Abahlali baseMerika bathululela kwiTitela kungekudala, bazimisele ukwenza imali. I-Cajuns yathengisa umhlaba ocebile ngaphaya koMlambo wase-Mississippi waza wanyusa ngasentshonalanga, ukuya kwi-modern-central-central Louisiana, apho babeza kulungisa umhlaba ngaphandle kweendleko. Apho, basusa umhlaba ukuze badle amadlelo kwaye baqala ukukhula kwezityalo ezifana nekotoni kunye nelayisi. Le ndawo iyaziwa ngokuba ngu-Acadiana ngenxa yempembelelo kwiCulture.
Inkcubeko kunye neelwimi
Nangona amaKajuns ahlala kwilizwe elithetha isiNgesi abambelele ngolwimi lwabo lonke le-19 leminyaka. I-Cajun isiFrentshi, njengoko ulwimi lwabo lwaziwa, lwalukhulunywa kakhulu ekhaya. Urhulumente karhulumente wavumela izikolo zesiKajun ukuba zifundise ngolwimi lwazo lwamaxesha amaninzi kwii-19 neyokuqala kwekhulu lama-20. Umthetho siseko waseLouisana ngo-1921 wawufuna ukuba iikoleji zesikolo zifundiswe kwisiNgesi lonke, okwencitshiswe kakhulu kwi-Cajun French kubantu abatsha.
Ngenxa yoko iCajun French yathethwa ngaphantsi kwaye yaphantwa yafa ngokupheleleyo phakathi nekhulu le-20 leminyaka. Imibutho efana neBhunga loPhuhliso lwesiFrentshi eLouanaana lanikezele imizamo yabo yokubonelela ngeendlela zaseLouanans kuzo zonke iindawo ukuze zifunde isiFrentshi. Ngo-2000, iBhunga labika i-198,784 iFrancophones eLouisana, ininzi yabo ikhuluma ngeCajun French. Zininzi izithethi zaseburhulumenteni zithetha isiNgesi nje ngolwimi lwazo lwangundoqo kodwa zisebenzisa isiFrentshi ekhaya.
Abantu abanobukrakra nabanobukratshi, amaKajuns abambelele kwizithethe zabo zenkcubeko, kuquka i-cuisine yabo ekhethekileyo. I-Cajuns inithanda ukupheka kunye neentlanzi zaselwandle, ukuxhamla kwiimvumelwano zabo ezidlulileyo kwiAtlantican Canada kunye namanzi ase-Louisiana asezantsi. Ukupheka okuqhelekileyo kufaka i-Maque Choux, isitya esisisiseko semifuno kunye neetatayi, anyanisi, ummbila kunye ne-pepper kunye ne-Crawfish Etoufee, isiqhamo esinamaqabunga, esivame ukusila. Ikota yokugqibela yekhulu lama-20 ivelise umdla ohlaziyiweyo kwiinkcubeko kunye nezithethe zeCajun, ezanceda ukwenza ukupheka kweCanjun ekuthandwayo emhlabeni jikelele. Ivenkile ezininzi eziseMntla Melika zithengisa izitya ze-Cajun.
Umculo weCajun uphuhliswe njengendlela yabaculi be-Acadian kunye ne-balladeers ukucinga kunye nokwabelana ngembali yabo. Ukususela eCanada, umculo wokuqala wawuvame ukuhlabelela i-cappela, kunye nezihlunu zesandla kunye neenyawo zonyawo. Emva kwexesha i-fiddle yakhula ekuthandeni, ukuhamba nabadlali. Ababaleki base-Acadian ukuya eLouisana baquka izandi kunye neendlela zokucula ezivela e-Afrika nakumaMative aseMelika kumculo wabo. Ekupheleni kwee-1800 zazisa i-accordion kwi-Acadiana ngokunjalo, ukwandisa izandi kunye nezandi zomculo weCajun. Ngokuvame ukufana nomculo weZydeco, umculo weCajun uhlukile kwiingcambu zawo. I-Zydeco ivela kwiiCreoles, abantu baseFransi abaxubekileyo (abo bangabakho ababaleki bama-Acadian,) abaSpanish nabamaMerika baseMelika. Namhlanje amaqela amaninzi eCajun naseZydeco adlala kunye, adibanisa izandi zawo kunye.
Ngenxa yokunyuka kweminye imimandla ngokusebenzisa i-intanethi ye-intanethi yeCajun isiqhelo siyaqhubeka sithandwa kwaye, ngokungathandabuzeki, siya kuqhubeka sikhula.
Iimpawu eziphambili ze-Movie ezivela kwi-'Hangover '
Iintlobo zeMveli yamayeza aseGrike
19 Imifanekiso enhle yabantu Abalala kwiindawo ezimbi kakhulu
Izicwangciso zeShishini soShishino
Iqela leMidlalo yeCandelo leNgcaciso yeeNgqungquthela kunye neengcingo zomculo
IsiNgesi isiNgesi, i-AKA IndE
Isayinwe '80s Music Keyboard Riffs
I-Hypothesis Testing usebenzisa i-One-Sample test-Tests
I-Benjamin Franklin Printables
Juniata College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Indlela yokudibanisa "Qinisekisa" (ukuya ku-Suit, ukuba ufaneleke)
I-15 I-Funniest Harry Potter "Yo Mama" Amahlaya
Ngaba ama-Conservatives aya kuguqula njani iMfundo
Ziziphi iimfuneko zokuvota kwi-US Elections?
I-Crystal Field Splitting Definition